निर्मलाका ‘सम्भावित किलर’मा प्रहरीको नजर, साउन १० मै खोलामा देखिएको थियो निर्मलाको साइकल - Experience Best News from Nepal
निर्मलाका ‘सम्भावित किलर’मा प्रहरीको नजर, साउन १० मै खोलामा देखिएको थियो निर्मलाको साइकल
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ कि १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको हत्या अनुुसन्धान जारी छ । गत साउन १० गते साथीको घरमा हिँडेकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत फेला परिन् । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धानबाट खुले पनि मुख्य कुरा अर्थात् हत्यारा को हो र हत्यामा संग्लन को–को थिए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अनुसन्धान जारी छ । तर, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने जवाफ प्रहरी अधिकारीसँग पाउन मुस्किल पर्छ ।
कञ्चनपुर प्रहरीले हत्या अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी डिएसपी कृष्णराज ओझालाई दिएको छ । ओझा भन्छन्, ‘‘अनुसन्धान जारी छ तर यसै केही भन्न सकिन्न ।’’ त्यसो त निर्मला हत्याको अनुसन्धान सुरक्षा निकायका विभिन्न टोलीले आ–आफ्नै ढङ्गले गरिरहेका छन् । तर, घटनाको चित्तबुझ्दो ‘सुराक’ फेला पार्न सकेका छैन््न् । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न कुराहरु बाहिर आए पनि विषयहरु आपसमा ‘म्याच’ हुन सकेका छैनन् ।
साउन १० मै देखिएको थियो निर्मलाको साइकल
साउन १० गते दिउँसो कञ्चनपुरमा ठूलो पानी परेको थियो । त्यो समय भीमदत्तनगर–१८ मा रहेको उखुबारी (निर्मलाको शव भेटिएको स्थान) वरपर रोपाइँ चलिरहेको थियो । कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बिहान खेत रोप्न आएकाहरु दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म खाना खान घर जान्छन् । त्यही समयमा स्थानीय महिला जमुना र धना भण्डारी बच्चासहित बाख्राका लागि स्याउला काट्न खोला किनारतिर जाँदै थिए । खोलाको वर जामुन लगायतका रुखहरु छन् । साँझको समयमा उनीहरुसँगै गएको बच्चाले खोलामा साइकल देखेका थिए ।
निर्मला हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा धना र जमुना भण्डारीको बयान यस्तो छ, ‘‘हामी दुई बहिनी बाख्राका लागि स्याउला काट्न गएका थियौं । साथमा यो फुच्चे पनि थियो । यसले खोलामा साइकल देखेछ र हामीलाई ‘ममी साइकल, साइकल’ भने तर हामीले वास्ता गरेनौं । पछि हेर्दा साइकल देखियो तर धेरै भाग डुबेको अवस्थामा थियो । तर कापी र अम्बा भने देखिएन । पानी परेकाले खोला तर्न सकिने अवस्थामा थिएन ।’’
धना र जमुना स्याउला काट्न गएको समय र उनीहरुले साइकल देखेको विषयमा दिएको बयानलाई आधार मान्ने हो भने खेत रोप्नेहरु खाना खान गएकै समयमा घटना भएको अनुमान अनुसन्धानकर्ताहरुको छ । पानी परेको त्यसमाथि खोलामा पानी भएकाले बगेर आएको होला वा अन्य कारणले भनेर उनीहरुले साइकलबारे चासो दिएनन् ।
के सम्भव थियो त उखुबारीमा घटना ?
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘साउन १० गते दिउँसोदेखि हराइरहेकी १३ वर्षीय निर्मला पन्त भोलिपल्ट साउन ११ गते बिहान ९ बजेतिर भीमदत्तनगर–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारी (लोकेन्द्र भट्टको) मा मृत अवस्था (अर्धनग्न र घोप्टो अवस्था) मा फेला परेको ।’ रोशनी बमको घरदेखि मृतक निर्मला फेला परेको स्थानसम्मको दूरी ६ सय मिटर र मृतकको साइकललगायतका सामग्री भेटिएको स्थानदेखि निर्मलाको घरसम्मको दूरी १३ सय मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्मलाको शव खोलापारी रहेको उखुबारीमा फेला परेको थियो । खोलाको वरपर बाक्लै रुखहरु नभएका होइनन् । तर साउन १० मा पानी परेकाले खोला सामान्य रुपमा तर्न सकिने अवस्थाको थिएन । खोला तर्नका लागि एउटा काठेपुल छ । निकै कमजोर अवस्थाको काठेपुलमा २ जना जान खोजे लड्ने सम्भावना रहन्छ । किनकी त्यो काठेपुलका फलेक कमजोर छन् र हल्लिरहेका हुन्छन् ।
निर्मलालाई बाटोबाट जबरजस्ती लागिएको हो भने पुलबाट सम्भव हुँदैन । किनभने पुलपारी एउटा घर छ । जुन घरबाट पुल तर्नेहरुलाई सजिलै देख्न सकिन्छ । यस्तोमा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुको तर्क यस्तो देखिन्छ– बाटोबाट निर्मलालाई लगेर २ देखि ४ बजेको बीचमा बलात्कार गर्ने अवस्था रहँदैन । कि निर्मलालाई भेट्नेबित्तिकै घाँटी अँठ्याएको हुनुपर्छ, वा समातेर मारेको हुनुपर्छ । मारेर उखुबारीमा लगेको हुनसक्छ ।
यदि अन्यत्र मारेर ल्याइएको हो भने शव भेटिएको स्थान शव व्यवस्थापन गर्ने स्थान होइन । किनकी घटना उज्यालो समयमै भएको देखिन्छ । निर्मलाको साइकल देख्ने महिलाको भनाइबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।
प्रहरी अधिकारीको बुझाइमा निर्मलालाई राम्रोसँग चिनेको, निर्मलाले आउने–जाने स्थान, बाटोको बारेमा पूरै सूचना भएको व्यक्तिबाट घटना भएको हुनसक्ने अर्को आधार हुनसक्छ । त्यो अपराधीले निर्मलाको बाटो ढुकेरै घटना घटाएको हुनसक्छ । योबाहेक अरु कुरा अनुसन्धानले ठम्म्याउन सकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धानले उखुबारी नै घटनास्थल भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सम्भावित ‘किलरमा नजर
यसअघि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व र सिआईबीको टोलीले बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै भीमदत्तनगर–१९ बागफाँटाका ४१ वर्षीय दीलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । दीलिपलाई सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीयले नक्कली अभियुक्त खडा गरेर अपराधी उम्काउन खोजिएको भन्दै आन्दोलन चर्काए । आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी नेतृत्व डिल्लीराज विष्टलाई हटाइएको हो । विष्टको स्थानमा एसपी कुवेरसिंह कडायतलाई कञ्चनपुर पठाइयो । तर एसपी कडायतले कञ्चनपुरको कमाण्ड सम्हालेकै दिन गोली चल्दा स्थानीय युवक शनि खुनाको ज्यान गएको थियो । त्यसअघि एसपी विष्टले कमाण्ड सम्हाल्दा पनि गोली चलेको थियो । घटनाको अनुसन्धान सिआईबीले पनि गरिररहेको छ ।
केही सम्भावित व्यक्तिलाई टोलीले निगरानीमा राखेको छ । ‘‘अहिले यसै भन्न त सकिने अवस्था छैन, तर केही व्यक्ति ‘सम्भावित किलर’ हुन् कि भन्ने लागेको छ तर पूरै आधार नपाईकन कसैलाई त्यसै समात्ने कुरा भएन,’’ अनुसन्धानमा रहेका एक अधिकारीले भने ।-बाह्रखरी
किन निर्मला पन्तकी आमाको रगत नमुना संकलन गरिदै छ ??
हिटरको तातोमा तड्पिइतड्पिई सकियो इञ्जिनियर दम्पतीको जीवन !
पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणबाट दुई नेपालीको मृत्यु !!
कोलकातामा बरामत भएको ३३ किलो सुन गाेरे भएको खुलासा, सुन नेपाल ल्याउन नमिल्ने
लुँडो खेलेर समय बिताउछन् प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी
सप्ताहबाट ३२ लाख संकलन